editor — Sun, 03/11/2018 - 05:48
यो पृथ्वी कसैको जिजुबाको दाइजो भए
लाखौँ निरीह जीवसँग कर उठाइन्थ्यो होला
तिम्रो सर्वश्रेष्ठताको माप के हो मान्छे ?
अहिंसा परमो धर्म ठूलो या जीव्राको तृष्णामा मांसाहार ?
विज्ञानलाई सोध... बुद्धलाई सोध....
तिम्रो र तिनको शारीरिक तत्वमा के भिन्नता छ रे ?
editor — Sun, 03/11/2018 - 05:42
डाँडैको घुमाउने चौतारी
लहरे वर र पीपल
चलिरहेको सिरसिर हावा ।
मृग नयनमा गाजल
घना बादल सरी कालो कपाल
लर्किएको लामो चुलठी
बारुले कम्मरमा बाह्रहाते पटुकी
editor — Sun, 03/11/2018 - 05:39
तिमीबिना छैन कतै किनारा
अतालिएको छु निकास खोजी
सहाय मेरो बन हे ! पियारा
देख्ने छैन तिम्रो लीला